China Soft PVC Wristbands & Namasongo ifektri abakhiqizi | SJJ
Ama-Wristbands weSoft PVC alungele abantu abadala noma izingane kuzo zonke izinhlobo zezikhathi. Amabhande ezihlakala ezithambile ze-PVC enziwe ngezinto ezithambile ze-PVC ezinezikhunta zokufa. Izinto zithambile, ziyaguquguquka, zihlala isikhathi eside futhi ziyimvelo. Usayizi ojwayelekile yi-220 mm yabantu abadala noma i-190 mm yezingane, ngenkathi osayizi abenziwe ngezifiso be ...
Ama-Wristbands weSoft PVC alungele abantu abadala noma izingane kuzo zonke izinhlobo zezikhathi. Amabhande ezihlakala ezithambile ze-PVC enziwe ngezinto ezithambile ze-PVC ezinezikhunta zokufa. Izinto zithambile, ziyaguquguquka, zihlala isikhathi eside futhi ziyimvelo. Usayizi ojwayelekile ungama-220 mm wabantu abadala noma u-190 mm wezingane, ngenkathi osayizi abenziwe ngezifiso betholakala ngokukhipha isikhunta esisha ngezindleko ezincane. Zonke izinhlobo zezitayela ze-Soft PVC Wristbands ezinjengezintambo, amasongo, amabhande awubuwula, amabhande ezihlakala, amawashi neminye imisebenzi enokuhlobisa okuhlukahlukene kuyathandwa emhlabeni wonke. Ama-logo enziwe ngokwezifiso afakwe embossed, alahliwe, agcwaliswe ngombala, aphrintiwe noma nge-laser. Imiphumela ye-2D ne-3D enezingxenye ezinemibala mihle kakhulu ukubonisa amamaki we-logo yakho, futhi wenze imiklamo yakho iphile futhi icace ngokwengeziwe. Ayikho i-MOQ enomkhawulo, isikhathi esifushane sokukhiqiza, ukuphepha kwekhwalithi ephezulu kanye nensizakalo enhle kuyinzuzo yethu ukukusiza ngaphezulu. Ama-Wristbands wethu we-Soft PVC namasongo anamalogo akho enziwe ngezifiso kanye nenhlanganisela yemibala ehlukahlukene kuzohlangabezana nezidingo zakho kubantu abadala noma ezingalweni zezingane nezimakethe zamasongo ezinwebekayo.
Ama-Motifs: I-Die Struck 2D noma i-3D
Ukuqedela: Amalogo angaphrintwa, afakwe embossed, alahlwe ngaphandle kwemibala, akhishwe ngombala ogcwele, kuqoshwe i-laser ngakho-ke cha
Izinketho Zokunamathisela Okuvamile: AKUKHO okunamathiselwe kokusekelayo noma izingcezu zensimbi zamabhande wempama
Ukupakisha: 1pc / polybag, noma ngokuya ngesicelo sekhasimende
I-MOQ: Ayikho i-MOQ enomkhawulo, ubuningi obuningi, intengo engcono
Langaphambilini Ozimele be-PVC Photo Frames
Olandelayo: Amafasitela we-Cable Soft PVC
Amasosha eBelt Buckles
Amaski wokulala ngokwezifiso
I-Silicone Coin Purse Keychain